Ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiya oo dib u qabsaday deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiya oo dib u qabsaday deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in howgal ay si wadajir ah u qaadeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay suurto gashay inay deegaankaasi dib u qabsadaan.
Deegaanka Halgan oo ku yaalla inta u dhaxeeysa magaalooyinka B/weyne iyo Buulo-burte ayaa waxaa hore ugu sugnaa dagaalyahanadda Al-shabaab, waxaana saakay suurto-gashay in ciidamada dowladda oo garab ka helaaya kuwa Itoobiyaanka ah ay halkaasi dib u qabsadaan.
Howlgalkaan ayaa kusoo beegmaya, xilli saacadaha soo socdo la filaayo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu socdaalkiisii ugu horeeyay ku tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay waday dhaq-dhaqaaqyo ay uga baxayaan magaalooyinka qaarkood oo dalka ku yaalla.
Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in saakay ay si nabad-gelyo ah ay dib ula wareegeen deegaanka Halgan.
Dagaalyahanadii Al-shabaab ee hore ugu sugnaa deegaanka Halgan ayaa la sheegayaa inay halkaasi isaga baxeen maalintii Isniinta ahayd ee lasoo dhaafay.
Deegaanka Halgan ayaa ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Hiiraan oo sida weyn u saameeysay abaaraha baahsan ee ka jira qeybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.